सानिमा बैंकको प्रगति यात्रा, खुद नाफा १८.२४% ले बढ्दा अरु के–के भयो ?
काठमाडौं : सानिमा बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ९८ करोड २० लाख ८७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । बैंकले गत वर्षको यसै अवधिमा भन्दा १८.२४% ले नाफा बढाएको हो । गत वर्ष सानिमाले ८३ करोड ५ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । बैंकको वितरण योग्य नाफा ९४ करोड ९९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
गत वर्ष यसैबेला वितरण योग्य नाफा ८० करोड ८३ लाख १९ हजार रुपैयाँ थियो । सानिमाको खुद ब्याज आम्दानी ४०.९९% ले बढेर १ अर्ब ९० करोड ९४ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा खुद ब्याज आम्दानी १ अर्ब ३५ करोड ४२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ थियो ।
यस्तै, सञ्चालन नाफा पनि १८.६३% ले बढाएर १ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत वर्ष सानिमाको सञ्चालन नाफा १ अर्ब १७ करोड ४८ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्र थियो । यो त्रैमास सम्ममा सानिमाले ८५ अर्ब ६८ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७७ अर्ब २२ करोड ६९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर्जामा लगानी प्रवाह गर्न सफल भएको छ ।
हाल सानिमाको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १२ करोड ५५ हजार रुपैयाँ छ । जगेडा कोषमा २ अर्ब ६४ करोड ३८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ देखिन्छ । खराब कर्जा ०.०३% बाट थोरै बढेर ०.२५% पुगेको छ । कस्ट अफ फन्ड पनि ७.२४% बाट बढेर ७.५७% कायम भएको छ ।
सानिमाको कर्जा निक्षेप अनुपात ७८.२५% रहेको छ । बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी पनि २० रुपैयाँ ७० पैसाबाट बढाएर २४ रुपैयाँ ६२ पैसा पुर्याउन सफल भएको छ । सानिमाको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा छ ।
सानिमा बैंकको दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट हेर्न यो लिंकमा जानुहोस् ।
प्रचण्ड भन्छन्–वामदेव राष्ट्रियसभामा जाँदा पनि खतिवडा ६ महिनासम्म अर्थमन्त्री बन्न सक्ने
सेयर तालिम नेपाली पैसामा फेरि सुरु हुँदैछ, बढ्दो बजारमा सुरक्षित तरिकाले कमाउन सिक्नुहोस्
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध, कुलमानले के भने ?
विद्युतीय बस भित्र्याउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
मितेरीको लाभांश कहिलेसम्म कायम सेयरधनीले पाउने ?
लिवर्टी इनर्जीको फागुन २७ बाट आइपीओ, आउने कसले पाउँछ भर्न ?
© Copyright 2017. All rights reserved by Nepali Paisa Media Pvt Ltd.
Chairman: Dr. Keshav Prasad Shrestha
MD : Ajay Kumar Shrestha
Directors: Abhijit Shrestha, Niraj Rudra Karmacharya
Mobile Number: 9801113124
Regd No (Department of Information): 173/073-74